Taliska Dab-demiska Somaliland oo war ma soo saaray masuul hore uga tirsanaa oo Muqdisho tegay | Berberanews.com
Home WARARKA Taliska Dab-demiska Somaliland oo war ma soo saaray masuul hore uga tirsanaa...
Taliska Dab-demiska Somaliland oo war ma soo saaray masuul hore uga tirsanaa oo Muqdisho tegay
Hargeysa-(Berberanews) Taliska ciidanka Dabdamiska Somaliland, ayaa war ka soo saaray wararka sheegay in taliye ku xigeenkii ciidanka Dab damisku uu ka soo degay Magaalada Muqdisho, ee dalka Soomaaliya.
War-murtiyeed ka soo baxay Ciidanka Dab damis ka Somliland ayaa lagu sheegay in Taliye ku xigeenku ka hor intii aanu Muqdisho ka degin shaqada laga Ruqseyay, waxaaan ay intaas ku dareen in uu ku fashilmay arrimo dhowr ah oo ka mid ah shaqada Ciidanka Dab damiska Somaliland.
Ciidanka Dab-demiska Qaranka Somaliland wuxuu halkan kaga jawaabayaa hadalo iyo qoraalo ay baahinayeen qaar ka mida warbaahinta Somaliland, kaas oo ku saabsanaa in Cabdixamiid Faarax Iidle, oo ka tirsan ciidanka Dab-demiska Somaliland uu ka degay magaalada Muqdisho.
Hadaba Ciidanka Dab-demisku wuxuu halkan ka caddaynayaa in Cabdixamiid Faarax Iidle si toosa looga ruqseeyay ciidanka muddo hore, sababtuna ay ahayd qodobadan soo socda:
War-murtiyeedkan oo soo gaadhay xafiiska warqabka Mareegta Dawan, ayaa u dhigneyd sidan.
Halkan ka Akhri faafhaahinta
Previous articleUganda Airlines to start direct flights to Hargeisa-state media
Next articleMagacyada saraakiisha Tigreega ee Itoobiya laysay